Helios EA Free - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeFree Forex EAsFree Helios EA
Helios dia Expert Mpanolotsaina mifototra amin'ny fanadihadiana momba ny vidin'ny tarehimarika.
Nahoana no Helios EA?
Tsy misy paikady ara-barotra.
Miasa amin'ny tenimiafina 4 sy 5-chif.
Maro ny fitantanana fitantanana ny risika.
Tsy misy fatiantoka tampoka.
Safidy mba hanakalozam-bola maro.
Ny faharanitan-tsaina dia manova ny antontan'isa momba ny statistika.
Fomba fanoratana vitsivitsy.
Tsy ilaina ny manamboatra sy manatsara ny - ny algorithm jeneraly efa nanao izany ho anao.
Free Helios EA - Ahoana no fampiasana azy?
mampiditra Helios ho an'ny chart 6 miaraka amin'ny M15 fotoana voafetra: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD.
Ampifanarao ny loza mety hitranga, hiparitaka sy hialoka.
Avelao ny varotra.
Helios EA - Parameter input
Risk - fitantanana fitantanana ny loza.
Mivelatra be - fetra farafahakeliny. Tsy miasa raha tsy mametraka ny "Mivelatra be " profile in Risk.
Niely i Max - avo lenta ny fiparitahana amin'ny fanokafana fifanarahana. Raha mihoatra noho io isa io ny fiparitahanao ankehitriny, dia tsy halefa ny baiko.
Max slippage - fialofana avo lenta.
Helios EA - Ny fahasamihafana eo amin'ny rindrambaiko isan-karazany
Ny isan'ireo fivarotana dia tsy miankina amin'ny mombamomba ny risika, fa ny vokany dia ny vokatra. Noho izany, samy hafa ny fananganana tahiry samihafa. Ny fampiasana fametrahana 1000 na avo kokoa ho an'ny Insane na Fix Lot (0.01), hatramin'ny 30 000 ho an'ny Safe. Raha tsy manana toy izany ianao dia ampiasao ny kaonty cent.
Ny profiles above Medium dia profil misy risika mitombo. Mitandrema amin'izany ary avereno ampahany amin'ny tombony.
Helios EA Free Download - Tena ilaina
Helios dia miasa toy izany amin'ny Devicore, fa mametraka ny Stop Loss ary mandray tombony amin'ny halaviran-dalana hafa, izay mampitombo ny tombombarotra raha mampihena ny fahamendrehan'ny tombony.
Mitandrema miaraka amin'ny tahan'ny risika mihoatra ny Medium! Ny EA dia mampitombo ny tombom-barotra amin'ny ambaratonga avo lozam-pifamoivoizana, saingy mametraka ny fametrahana amin'ny risika lehibe kokoa.
Ny EA dia miorina amin'ny fandalinana statistika, ka ny vokatra ara-barotra dia hanatona ny valin'ny teôreko amin'ny alàlan'ny fifanarahana marobe (araka ny lalàna amin'ny isa marobe). Ny EA dia mety hitondra fahavoazana iray volana ary hahazoana tombony be ny volana manaraka. Noho izany, tokony hampiasaina amin'ny angona 6 amin'ny fotoana iray ny fampiasana azy mba hampitomboana ny isan'ny varotra ary hampivelatra ny fidiram-bola.
Helios dia manokatra 1-3 miresaka amin'ny mpivady iray isan-kerinandro.
Ny EA dia tsy manova ny fifanarahana ary tsy mametraka baiko miandry, mba hahafahana manakana azy tsy hanisy ratsy.
Azafady azafady fa ny kaontinao dia manohana ny fanakanana. Ny EA dia tsy miorina amin'ny paikady hingging, fa afaka mahangona filaminana tsy miankina maro amin'ny mpivady iray.
Fahaiza-mandroso hery ny EA Review